Gwara remwana rinotova nemitemo yekutaurirana kwevakuru - Kudzidziswa kwekuziva
Chiito chiito chinoonekwa pakutanga kwazvo mumwana uye chinotungamira pane chinotevera kutaurirana nemuromo. Muzhinji isu tinogona kupatsanura zviito mukati deictic (chiito chekuratidzira) e iconic (edza kutevedzera chimwe chinhu).
Classical dzidziso pamusoro pekuvandudzwa kwekutaurirana kupatsanura madhisiki mumapoka maviri:
Zvokuita (kana mwana akanongedzera kubvunza)
Kuzivisa (kana mwana achinongedzera kugovana manzwiro uye zviitiko).
Sekureva kwechiremba wezvepfungwa weAmerica Michael Tomasello (Kwakatangira kutaurirana kwevanhu) maonero aya anoderedza kwazvo. Muchokwadi, mune akateedzana ezvekuedza iye anosimbisa kuti mwana ari sei usazvikanganise kune zvikumbiro zvekugutsa, asi anotarisira kuti mukuru agovane manzwiro aanonzwa kuchinhu; uyezve, mitezo inogona kureva zvinhu zvisipo uye zviitiko zvinofamba kupfuura chikumbiro chiripo chechimwe chinhu chinoonekwa. Izvi zviitiko, izvo zvingaite kunge zvisina basa, pachinzvimbo vanosimbisa kuve nehunyanzvi hwakakosha pane chikamu chemwana: kutsvaga kwekutarisirwa kwakabatana, kuziva kweruzivo uye zvinotarisirwa zveumwe, kugadzirwa kwenzvimbo.
Kune munyori weAmerica, saka, kune vamwari kugadzirisa zvinotarisirwa kushandiswa kwechiratidzo chakapedzisirwa icho, pachokwadi, chingave chinogoneka kuti mwana aite kubva mumwedzi yekutanga yehupenyu, asi icho chinoshandiswa nekuziva nemwana kutenderedza mwedzi gumi nemaviri.
Uye chiratidzo chechiratidzo? Kunyangwe zvanyanya kuomarara kubva pakuziva kwekuona uye nekudaro dzinozoonekwa mumashure, ivo vanowanzo kuderera nekukurumidza kutenderera makore maviri zera. Chikonzero chikuru ndeche kubuda kwemutauro wekutaura iyo inotsiva chiratidzo chekuteedzera: patinodzidza izwi, tinomira kugadzira iyo pantomime yechinhu icho izwi rinoreva; mushure mezvose, kushandisa mazwi kuri nyore uye kuchipa. Pane zvinopesana, chiito chekuratidzira chinoramba chiripo kwenguva yakareba, kunyangwe panotangira mazwi ekutanga. Muchikamu chekutanga, muchokwadi, inosanganisa mutauro (mwana anogona kutaura izwi - semuenzaniso chiito - nekuchisanganisa nechiratidzo), uye pakupedzisira hachimbonyangarika zvachose. Kazhinji kazhinji kupfuura zvatinofunga, kutaura zvazviri, isu vanhu vakuru tinoratidzawo munhu wekutaurirana padyo kuti asimbise kana kuwedzera izvo zvatiri kutaura nemuromo.
Kudzidza zvakawanda: Michael Tommasello, Kwakatangira kutaurirana kwevanhu, Milan, Cortina Raffaello, 2009.
kubata kwemwana, chiratidzo chechiito, chiratidzo chechiratidzo, mutauro wevana
Chiito chemwana chinotova nemitemo yekutaurirana kwevakuru2021-04-282021-04-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/04/gesto-deittico.png200px200px